डुङ्गेश्वर सांस्कृतिक तथा पर्यटन महाेत्सव २०७६ सम्पन्न – Dullu Khabar
डुङ्गेश्वर सांस्कृतिक तथा पर्यटन महाेत्सव २०७६ सम्पन्न
१७ माघ २०७६, शुक्रबार १२:५९
दैलेख (डुंगेश्वर) । डुंगेश्वर गाउँपालिकामा संचालन भएकाे महाेत्सव आज सम्पन्न भएकाे छ । ‘स्थानिय कला संस्कृतिकाे संरक्षण गराै, डुङ्गेश्वर पर्यटन महाेत्सव सफल पाराै’ भन्ने मुल नारका साथ डुङ्गेश्वर सांस्कृतिक तथा पर्यटन महाेत्सव २०७६ बुधवार देखि सुरु भएकाे कार्यक्रम आज शुक्रबार सम्पन्न भएकाे हाे ।
डुङ्गेश्वर गाउपालिकाकाे आयाेजनामा स्थानिय स्स्कृतिकाे संरक्षण गर्ने मुख्य उद्येश्यका साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमकाे आयाेजना गरेकाे हाे । महाेत्सवकाे अन्तिमदिनमा दैलेखी कलारहरुकाे वेजाेड प्रस्तुति रहेकाे थियाे । आजकाे कार्यक्रममा लाेकदाेहाेरी गाएक राम जि दैलेखी, लाेकेन्द्र जिसि कुमार, मन कुमारी सुनार लगाएतका स्थानिय कलाकारहरुकाे प्रस्तुति रहेकाे थियाे ।
साथै कार्यक्रममा देउडा कलाकार विमला वुढा, जय बहादुर थापा, भिम प्रसाद शर्मा लगायतका कलाकारहरुले प्रस्तुति राखेका थिए । कार्यक्रमकाे मुख्य प्रायाेजककाे रुपमा वेलासपुर पाेलिकि्लिनिक डुङ्गेश्वर रहेकाे थियाे ।
सहप्रायाेजकहरुमा सानिमा वैंक, वतावरणिय वहुउद्येशि्य सहकारी संस्था डुङ्गेश्वर,सुनिता हाेटल, वाजेनाति वाख्रा फर्म, नवजिवन हाेटल, निशा हाेटल, नजुमा वुटवल फेन्सि, एनडिपि ट्रेडस रहेका थिए ।
यस्तै मिडिया पार्टनरकाे रुपमा द्राेणाचल मिडिया प्र.लि., रेडियाे धुर्वतारा एफ.एम. र डिजिटल कर्णाली अनलाइन कर्णाली रहेकाे थियाे । समापन कार्यक्रमकाे प्रमुख अतिथि डुङ्गेश्वर गाउंपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ज्ञावली रहेका थिए भने कार्यक्रमकाे अध्यक्षता डुङ्गेश्वर गाउपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष एवम् कार्यक्रम संयाेजक वम बहादुर विसिले गरेका थिए ।
कार्यक्रमकाे सञ्चालन गाेविन्द देव भारती र अभिषेक अनुरागले गर्नु भएकाे थियाे । कार्यक्रम लाेहाेरे खाेला र पराजुल खाेलाकाे दाेवान त्रिवेणीकाे छेउमा तीन दिन सम्म सञ्चालन भएकाे थियाे । अन्तिम दिनमा पनि हजाराै दर्शकहरुकाे सहभागिता रहेकाे थियाे । डुङ्गेश्वर वजारमा सांस्कृतिक कार्यक्रमकाे सञचालनले गर्दा लाखौंको काराेवार भएकाे आयाेजकले जनाएकाे छ ।
यस्ताे सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने आयाेजकले जनाएकाे छ । कार्यक्रमकाे अन्तिममा गाउपालिकाले कलाकारहरुलाई सम्मान गरेकाे थियाे ।